Noorweey: Hooyo soomaali ah oo xabsigga loogu taxaabay dhimashadda gabadheeda | Somaliska
Noorweey: Hooyo soomaali ah oo xabsigga loogu taxaabay dhimashadda gabadheeda
Magaaladda Namsos ee ku taala bartamaha dalka Noorweey, ayaa hooyo soomaaliyeed oo halkaasi degan xabsiga loo taxaabay ka dib markii lugu eedeyey ineey sabab u aheyd geerida gabar ay dhashay oo ku geeriyootay isbitaalka magaaladaasi.
Warbaahinta Noorweey oo arrimahan wax ka qortay ayaa sheegay in hooyadan la xiray ay aheyd qof xaamilo (uur leh). Maxkamadda gobolkuna ay go’aamisay in hooyadaasi xabsiga lugu hayo muddo labbo toddobaad ah, lagana mamnuuco booqashadda cid kasta. Nin isna lugu sheegay inuu adeerkeed yahay gabadha geeeriyootay ayaa sidoo kale isna xabsiga loo dhaaciyey halkaasoo muddo toddobaadyo ah uu jiifi doono.
Hooyadda iyo adeerkan ayaa lugu eedeeyey in ay sabab u ahaayeen dhaawac gabadhaasi yar ka soo gaaray madaxa oo ay markii dambe u dhimatay. Hooyadda iyo adeerka ayaa eedeymahaas iska fogaayey, waxaana ay hooyadu sheegtay in gabadhu sariir ka soo dhacday horeyna ay u qabtay daqar madaxa ka soo gaaray.
Dhacdadan ayaa ah mid si weyn looga hadal hayo dalkaasi Noorweey iyadoo saxaafada dalkuna ay siyaalo kala duwan wax uga qortay. Falalka noocan ayaa ku badan qoysaska soomaalida Noorweey. Ma ahan falkii ugu horeeyey ee qoys soomaali oo loogu xiro dhaawac ay u geeysteen carruuurahooda.
Booliska Iswiidhan oo dar dar gelinaya la dagaalanka kooxaha argagaxisadda
Idiris oo qabay cudurka autism-ka oo geeriyooday saacad ka dib markii la geeyey hooy xanaano ah